Kana bhizinesi rikabvunza "tinoita sei kuti tiwedzere kuwanda traffic site?" Kana "tinoita sei kuti titengese kutengesa?" Iko kushambadzira kunopa mhinduro.
Kushambadzira ndiyo nzira inotora bhizinesi kukurudzira zvigadzirwa kana masevhisi.
Ini ndakagadzira iyi yekutarisa kuti ipe inokwanisa kushambadzira mataipi ebhizinesi rako raunogona kushandisa kugadzirisa matambudziko ako ekukurudzira nematambudziko. Iyi runyorwa inofanirwa kuve nzvimbo yekutanga, ichikupa mazano uye mazano ayo anotangisa iwe parwendo rwekushambadzira kubudirira.
Saiti uye App Performance
Yako kuedza online kushambadzira inoda hub, yepakati poindi kubva kwauri kwese kukurudzira kwako kunotorwa uye kwese uko traffic uye inotungamira inotungamirwa. Kune mazhinji mabhizinesi - kunyanya ecommerce mabhizinesi - iyo hubhu webhusaiti kana app.
1. Dhizaini yenhare. Mabhizinesi anotarisana nevatengi uye kunyange makambani eB2B haafanire kutaridzika kupfuura mushumo we analytics kuti uzive kuti vashanyi vazhinji vari kushandisa nharembozha. Vanoda kusvika 80 muzana yevaAmerican vane nharembozha inochengetedzwa nhare.
Iyi muzana inogona kuve yakakwira kune mamwe mapoka. Semuenzaniso, 89 muzana yevakuru veAmerica vezera 30 kusvika 49 ine smartphone, uye 94 muzana yevaAmerican zera 18 kune 29 vane smartphones.
Chii chakanyanya, 20 muzana yevaAmerican chete vanowana iyo internet kubva kune foni mbozha. Izvi zvinoreva kuti mumwechete muvatengi vashanu haashandise desktop kana desktop kombiyuta zvachose. Nzira chete iyo bhizinesi rako inogona kusvika kwavari ndeye kuburikidza newebhu mobile.
Dhizaini yekutanga. Wobva washandisa mhinduro dzinoteerera kugadzira webhusaiti inoshanda kana app pane chero skirini.
2. Vaka inokurumidza mapeji mafoni. The purojekiti kumashure kwakawedzera manhamba mafoni ane chinangwa chekubatsira mapeji ewebhu kutakura kanenge kamwe. Uchishandisa seti yemirairo, zvikamu, uye humwe hunyanzvi, AMPs inovhura, kana uchizoda, sechiedza switch.
Vatengi vako vekufambisa vanozotenda mashandiro avo, uye saizvozvo Google, iyo inogona kuratidza inokurumidza mapeji mune inokosha AMP carousel. Saka yako saiti inogona kuoneka pamusoro pevanokwikwidza vako mumitsva yekutsvaga.
3. Ita kuti ive inofambira mberi webhu. Paunenge uchitarisa pane yekutanga mafoni -kutanga anosanganisira AMP - unogona kuitawo saiti yako a inoenderera mberi webhu.
MaPWA vanoshandisa application programming yekudyidzana sevashandi vebasa (kumashure zvinyorwa kuti vatsigire basa risingaiti) uye vanosundira zviziviso kuti vape vashanyi vesaiti yako nharembozha yakafanana neyavo yenharembozha app. Iwe unogona kunyange kuisa chiratidzo pane yevashanyi mobile home screen nePWA yako.
4. Shandisa Mwenje. Google's Lighthouse ndeyemahara, yakavhurika-sosi, uye inoshanda yewebsite yekutarisa webhusaiti. Iyo inogona kuiswa kuti ishandise kubva kuseva, uye inovakwa mumhando dzazvino dzeGoogle's Chrome web browser. Taa yekuedza inoyedza peji rekuita uye kutevedza nemaitiro akakwana uye zvinodikanwa.
Iyo Taa yekutarisa ichapa zvikamu zvishanu zvekupindura.
Performance. Ziro kune 100 chinzvimbo che kukurumidza sei yako webhusaiti mitoro uye kuti zvinhu zvinokurumidza sei kuwanikwa kune vashandisi pane mobile. Kuongorora uku kunoenderana nehuwandu hwe data data, kusanganisira kana zvatanga zvinhu zvikaonekwa uye kana peji racho rikabatana.
Kufambira mberi webhu. Kubva pane PWA nheyo yekuongorora, Mwenje inotarisa kune yako saiti ngazi yekuzara. Google inosimbisa maPWAs nekuti anovandudza mashandiro efoni. Vanogona kukwidzirisa injini dzekutsvaga, zvakare.
Kuwanika. Ichi chiyero chiri pakati nepakati chinorema nezve 35 kuwanika maitiro. Accessibility ndechimwe chinhu chakakosha pazvinhu mabhizimusi epamhepo anogona kutarisa, saka zvinobatsira kwazvo kuti izvi zvivakwe mauri. Zvakakosha kutaura kuti hazvipe nzvimbo inowanikwa zvinogona kuve zvisiri pamutemo.
Maitiro akanyanya kunaka. Inotarisa yekushandisirwa kwazvino webhu kuvandudza maitiro akanaka se HTTP / 2.
Kutsvaga injini optimization. Inotarisa mapfumbamwe e-SEO basics. Izvi zvakaderera zvishoma kupfuura vamwe chechitatu-bato re SEO rekuongorora maturusi kana kuwedzerwa, asi zvinogona kubatsira.
Edza kukwidziridza saiti yako kusvikira iwe wagona kuwana zvakanaka mune yega yega yeSituation chikamu.
Mushure mekunge mave nehurombo rekuita rakakwira, iwe unoda seti yezviyero zvekubatsira kutarisa saiti kana app traffic uye kuongorora kushambadzira kwako kuita.
5. Shandisa analytics. Izwi rekuti "analytics" rinotsanangura kuwanikwa uye kududzirwa kwedata. Kune webhusaiti yako kana app, nzwisisa kuti vatengi vanosvika sei uye vanobatana.
Ziva key performance zviratidzo yako analytics software inogona kutevedzera. Semuenzaniso, kana iwe uchishandisa Google Analytics, unogona kutarisa kuti yakawanda sei yako saiti traffic kubva kune organic yekutsvaga kuti udzidze maitiro ako eSEO ari kufambira mberi. Kana iwe unogona kuongorora traffic inouya kubva online online ads.
Iwe unogona zvakare kutarisa bounce rate sechiratidzo chinoratidza chekuti zviri mukati sei zvauri kuita nevashanyi. Kana kuenzanisa chiyero chevashandisi pane vashandisi vekuparadzanisa desktop desktop kuona kuti yako yekutanga-yekugadzirwa inoshanda.
Yako maturusi ezve analysics ichakubatsira iwe kuti unzwisise kuti kushambadzira kwako kuri kushanda sei uye kuti bhizinesi rako riri kukura sei.
6. Seta chinangwa uye kutendeuka kutevedzera. Google Analytics uye zvishandiso zvakafanana zvinokubvumira iwe kuti ugadzire chinangwa uye kutendeuka kutevera. Shanduko dzinogona kuve chero chinhu kubva kunonyorera tsamba uye kutamira peji kushanya kune ecommerce transaction.
Sezvo zvinangwa uye shanduko ichave iyo yekupedzisira yeakawanda emabasa ako ekushambadzira, kuve nechishandiso chekuyera ivo kwakakosha.
7. Tarisa tarise kushambadzira. Software software, yakadai seyambotaurwa pamusoro peGoogle Analytics, inogona kusangana neGoogle Ads uye mamwe madhijitari ekushambadzira edijita uye maturusi.
Paunotarisa mashandiro ekusimudzira mune izvo zvakafanana analytics matombo aunoshandisa kune saiti traffic uye SEO, unogona kuwana maonero akazara nezvekuti kushambadzira kwako webhu kuri kuita sei.
8. Tevera kutengesa. Ecoommerce mabhizinesi anofanirwa kutevedzera kutengesa. Iyi mishumo inogona kuvakwa mune ecommerce papuratifomu, asi kunewo chechitatu-bato yekutengesa uye zvitoro zvekutengesa zvekushandisa zviripo. Tarisa maitiro ekutengesa maitiro, mari yekutumira, uye purofiti.
Iwe unogona kuona peteni mune yekutanga zvinhu pane ino cheki. Ivo vese vakatarisana nekugadzirira yako webhusaiti kambani webhu kana programu yekubudirira usati waisa mari mukutyaira saiti traffic.
Yako saiti inogona kungova nemukana mumwe chete wekuita fungidziro yakanaka nemuenzi. Nyatso shandisa izvozvo. Muchikamu chino chinotevera, iwe unowana mazano ekubatsira kushandurwa.
9. A / B bvunzo yekudaidza-kune-chiito uye tenga mabhatani. shandisa A / B kana kuyedza multivariate kune ese akakosha matanho ekushandura pane yako saiti kana app. Izvi zvinofanirwa kusanganisira kuyedza kutenga mabhatani pane zvigadzirwa zvemukati kana mhando yemapeji. Inofanirawo kusanganisira mabhatani pane ngoro yekutenga uye mapeji ekutarisa.
Iwe unoda kunzwisisa kuti zvese zvese kubva mukutumirwa kwemahara zvinopa kune zvemukati kune mabhatani kuiswa kwezvibodzwa zvinokanganisa yako saiti kana kugona kweAppan yekushandura mabrowser kuvavatengi. Kuongororwa kweA / B kunokubvumira kuti udzidze izvo vashanyi vesaiti yako - vanogona kuve vatengi - like uye nekupindura. Iwe unogona kukwikwidza kumwe kufunga kwako uye kuwana chaiyo data.
Pane yega yega, sarudza imwechete yekuongorora. Pitira yako yazvino shanduro kupokana neanopikisa uye dzidza kuti shanduro ipi inoshandura zvirinani.
10. Edza uye simbisa saiti kana app ekutsvaga. Zvichienderana neongororo, imwe nzvimbo pakati pe40 uye 60 muzana yevashanyi ecommerce vanozofamba kuburikidza nekutsvaga saiti. Saka iwe uchazoda kuchinjisa icho.
Tarisa uone saiti kutsvaga mhinduro. Iko kutsvaga kuri kudzosera zvakanakira mhinduro dzemibvunzo yakakurumbira here? Mhedzisiro yekutsvaga iri mune yakanakira kutendeuka? Uri kupa ruzivo rwakakwana mumhedzisiro yevatengesi kuti vaite chisarudzo chekutenga? Mhedzisiro yekutsvaga inofanirwa kutungamira shopper kune zvigadzirwa uye kubatsira kukurudzira kutenga.
Zvekare, shandura iyo yekuenzanisa uye kupererwa. Usarega typo ichidhura bhizinesi rako kutengesa.
11. Edza uye simbisa chigadzirwa chinomisikidzwa. mune 2015 blog post, Optimizely, chikuva chekuyedza, chakatsanangura muchidimbu kuti online lingerie mutengesi Adore Me akaedza kanenge zvese zvinhu zvechiratidziro chechigadzirwa, kusanganisira mhando dzaakashandisa mune yayo yechigadzirwa kutora mafoto uye nemhando idzo idzo mhando dzakatumirwa.
"Sekutsvagurudza kwemukati, shanduko diki pamamiriro emuenzaniso, sekuchinja kubva paruoko ruoko kubva muchiuno kusvika paruoko mumusoro, inogona kutengesa zvakapetwa."
Uchishandisa A / B yekuyera nzira, simbisa zvigadzirwa mifananidzo, misoro, uye chigadzirwa dhata peji kurongedza.
12. Shandisa chat chat. Kurarama kutaura inopa vashanyi vesaiti nyore uye nekukurumidza kuwana kwebasa revatengi. Kana iwe usingaite chimwe chinhu, kupindura mibvunzo yevashanyi nekukurumidza kunogadzirisa shanduko yekambani yako. Asi kutaura kwepamoyo kunokwanisawo kuva sosi yakavimbika yekupa mhinduro yekuita.
Sezvo vatengi vebasa revashandi vako vachikurukurirana, vanofanirwa kutarisa nzvimbo dziri pawebhusaiti apo vatengi vaiomerwa nekufamba kana kuenderera. Kana zvangoonekwa, bvisa kana kuvandudza matambudziko aya kuita kuti zvive nyore kutenga.
13. Shandisa kuongorora kweNet Promoter. Bhizinesi rako Net Promoter Score inogona kuve yega yakanakisa chiyero chekuita kwakawanda. Uye kugadzirisa iyo inogona kuve yako yakakosha kutendeuka optimization basa.
Net Promoter Score iri nyore-kunonzwisisika kuvimbika kwevatengi chiratidzo chinoshamwaridzana nekutengesa uye kukura purofiti. Vatengesi vepamhepo vanogona kushandisa iyi metric uye yakabatana nevatengi kubatsirana kugadzirisa basa revatengi, kukurudzira kutendeka, uye kuwedzera kukura.
Ongororo yeNet Promoter ichabvunza mubvunzo mumwe unokosha:
Ungaita sei iwe uchikurudzira yedu [kambani, chigadzirwa, kana sevhisi] kushamwari kana shamwari.
Mhinduro yacho inoyerwa pachiyero che zero kune 10. Ziro rinomiririra "zvisingaite" (kana "zvisingaite zvachose"). 10 iri "zvakanyanya kuitika."
Vapinduri vakakamurwa mumapoka matatu.
Vasimudzire (banga 9-10) ndivo vatengi vanogona kukurudzira kambani yako. Ivo vanozotenga kubva kubhizinesi rako uye kukurudzira vamwe, zvakare.
Passives (chiratidzo 7-8) vatengi vanoguta, asi vasina kutaurwa uye vasina hanya. Aya vanhu anogona kutenga kubva kune anokwikwidza.
Zvishandisi (mutsetse 0-6) vasiri vatengi vasingafarire vanogona kukuvadza rako bhizinesi zita uye kutadzisa kukura.
Kuti uverenge kambani yako yeNet Promoter Score, bvisa iyo muzana yeDectivors kubva muzana yeVanokurudzira nguva yakapihwa. Mhedzisiro yacho inoratidzwa sehuwandu hwese, kwete peresenti.
Paunogadzirisa kambani yako yeNet Promoter Score, unovandudza bhizinesi rako.
Yekutsvagisa injini yekushandisa ndicho chiitiko chekutaurira chinangwa chepeji uye kukosha munzira inobatsira kutsvaga injini dzinongedzera peji uye nzwisise painofanira kuiswa kune vanotsvaga.
14. Nyora mapeji ezvekudyidzana mazita. Nyora zita rinotsanangudza, rakaringana, uye rinoshamisira reji rega rega pane yako saiti. Musoro unofanirwa kuve unoreva kune vashanyi vesaiti uye tsananguro yekutsvaga injini.
"Chinyorwa chezita ndicho chinonyanya kuyerwa pane-peji peji, saka zvakakosha kuti uzvigadzise nenzira kwayo," akadaro Gurukota rezve SEO VaGeorge muhurukuro kubva SEMrush Academy's SEO Fundamentals Course.
"Tarisa chikoro chekare chezwi 'keyword phrase bar kiyi mutsara mutsara wechipiri bar bar." Rangarira, iyi ichave yako weblue link muSERP - iwe unofanirwa kunyora chimwe chinhu chinonakidza icho chinganyengedza vanhu kudzvanya kupinda kune yako saiti. '
Funga nezve tag seka senge yemusoro wekushambadzira. Izvo hazvizongobatsira yako peji rezinesi mumainjini ekutsvaga, asi inogonawo kurudzira mumwe munhu kupinza kana ichinge yaonekwa pane yekutsvaga injini mhinduro peji.
15. Nyora mafomu anogadzira meta tsananguro. Iyo meta tsananguro tag inowanikwa mumusoro wechikamu HTML peji rewebhu inogona kunge isisinei nemhedzisiro yekuti injini dzekutsvaga dzinoisa sei peji rako. Asi iyo tsananguro inogona kuramba ichioneka pane yekutsvaga peji peji.
Google nedzimwe injini dzekutsvaga zvinosanganisira zvinyorwa zvinotsanangudza pazasi pekubatanidza kune peji kune imwe mhinduro. Izvi zvinotsanangurwa zvinyorwa zvinogona kuuya zvakananga kubva pane yako peji peji kana, kazhinji, ingori iyo meta tsananguro.
kana iwe nyora tsananguro ye meta, taura muchidimbu. Edza kuichengeta nezve 160 mavara. Shandisa zvirevo zvinoshanda. Usatya kutanga kutsanangura nezwi rakaita sekuti “shopu” kana kuti “edza.” Sanganisira yekufona uchiita, kunyange kukumbira vangangoita vatengi kuti vatenge. Uye usakanganwa kushandisa mazwi akakosha emazwi anopindura mubvunzo wekutsvaga.
16. Sanganisira misoro yakakodzera. Injini dzekutsvaga dzinoda kuti zvemukati zvirongedzwe munzira yakajeka. Makore akati wandei apfuura, injini yekutsvagisa yaifarira imwechete yeH1 tag uye fungidziro yekufungidzira yemasagi emusoro. Asi ichi hachichisiri chinhu chinodiwa.
Ingoshandisa keyword-rich misoro kunyatso kurondedzera zvemukati peji. Rangarira zvinogona kuve zvakanaka kuve nemusoro wakajeka wepeji, asi chinyorwa chakajeka chinogona kutsanangurwa neakawanda misoro tags, kusanganisira H1 tags.
Google Webmaster Trends Muongorori John Mueller akataura chokwadi ichi zvakajeka muDecember 2017 vhidhiyo.
17. Sanganisira alt mavara mumifananidzo. Iyo tag tag inogona kubatsira yako mifananidzo kuoneka mumifananidzo mapeji paGoogle uye dzimwe injini dzekutsvaga. Izvo zvakakoshawo kuti uwanikwe, kune vashandisi-vanokanganisika vashandisi. Saka maalogi tag anobatsira SEO uye vashanyi vesaiti.
18. Shandisa yakarongeka yedhata markup. Yakarongeka data markup inobatsira kutsvaga injini kutsvaga ruzivo rwechigadzirwa uye zvimwe zvirimo pane yako saiti. Zvakare, injini dzekutsvaga dzinogona kuratidza imwe yeruzivo mumitsva yekutsvaga, zvingave zvichawedzera kuti vangawanda sei mabhatani ayo rimwe peji vowana. Yakarongeka dhata yedhairekesheni inogonawo kuitisa kuti iite sekuti inoratidzika kune zvikamu zvakakosha pane peji rekutsvaga.
Kune akati wandei sarudzo dzekuwedzera yakarongeka yedhata markup kune yako peji. Asi Google yatanga kuda JSON yekubatanidza Data kana JSON-LD. Zviri nyore kushanda nayo uye inogona kusanganiswa yako saiti template.
19. Gadzira ma URL akachena, anowanikwa. Ma saiti ako eema URLs anofanirwa kuve akakosha-akapfuma, akasiyana, uye mapfupi. Izvo zvinofanirawo kuve nyore kuti munhu averenge, zvinowanikwa nevashandisi vakaremara, uye vasina tsvina.
Iko kune zvikamu zvitatu zve URL zvekutarisa: iyo domain, iyo sub-domain, uye slug.
Iyo domain izita rako resaiti. Izvo zvinogona kubatsira kuva neakakosha kiyi muzita rako rezita.
Iyo subdomain ichiri chikamu chesaiti yako, asi Google uye dzimwe injini dzekutsvaga dzinogona kubata subdomain sechinhu chakasarudzika kana uchifunga nezvesaiti yesayiti. Saka chenjera mashandisiro aunoita subdomain.
Iyo slug chikamu cheiyo URL inotsanangura iyo chaiyo peji mune yekutarisa. Inogona kusanganisira iyo gore, mhando, kana yakafanana, asi zvakare inofanirwa kutsanangura iyo yakatarwa peji mukutarisa.
Kupatsanura mazwi ari muiyo simbe ne hyphens, bvisa mazwi akajairika sa "an" kana "the", uye dzivisa kushandisa izwi rinokosha kanopfuura kamwe. Google inovenga keyword zvinhu.
20. Basa HTTPS kana HTTP / 2. Injini dzekutsvaga dzinofarira mawebhusaiti akachengeteka uye dzinogona kuisa nzvimbo yakachengetedzeka pamusoro peiyo isina kuchengetedzeka kana zvimwe zvinhu zvese zvakaenzana.
Icho chikonzero chiri nyore. Injini dzekutsvaga dzinoda kuchengetedza vashandisi.
"HTTPS inobatsira kudzivirira vanopinda mukati kuti vasakanganise nekutaurirana kuri pakati pemawebhusaiti ako nevashandisi vako. Vapambi vanosanganisira vanorwisa vane hutsinye uye makambani ari pamutemo asi anokatyamadza, akadai se ISPs kana mahotera anopinda shambadziro mumapeji, " akanyora Kayce Basques yeGoogle's Chrome Dev Chikwata.
Kungofambisa saiti yako kubva kuHTTP kuenda kuHTTPS (kana kunyangwe iri nani HTTP / 2) ichadzivirira iyo kutaurirana, kubatsira kuchengetedza ruzivo rwepachivande, uye kubatsira nzvimbo yako yemawere zviri nani mukutsvaga kwekutsvaga.
20. Monitor zvinokambaira zvikanganiso. Google yekutsvaga Console ibasa remahara rinotendera iwe kuti utarise chimiro chewebsite yako. Chimwe chezvinhu zvekushandisa i “Crawl kukanganisa” mushumo. Uyu mushumo unokuratidza kana Google yekutsvaga bot iri kunetseka kusvika kune chero mapeji ako. Iyo inogona kuva kiyi yekuzivisa zvinetso zvehunyanzvi.
Gadzirisa zvikanganiso izvi. Zviri nani indexing (uye pamwe zviri nani chinzvimbo) inofanira kutevera.
Chibatanidza Kuvaka Strategies
Chivakwa chekubatanidza ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kukosha zvaungaita kubatsira rako rezinzvimbo pamapeji eSERPs. Asi kubatanidza kuvaka kunogona kuve kwakawanda basa. Kazhinji zvinosanganisira kubata vamwe varidzi vesaiti kana kushanda nesimba kuti ugadzire zvemukati.
21. Batanidza kubva kumasayiti iwe aunodzora kana kukurudzira. Muvhidhiyo inotsanangura maitiro ekuwana mashoma ekutanga anowanikwa saiti, Moz muvambi Rand Fishkin anotsanangura kuti ungatsvaga sei Google kuzita rebhizinesi rako kana zita revanowanikidza kuti vaone masosi aunokwanisa kudzora kana kufambisa. Aya mawebhu anogona kukubvumira kuti ubatanidze zvakananga kune yako saiti.
Mienzaniso inosanganisira LinkedIn, Facebook, uye Twitter. Kana iwe uri muvambi kana mutungamiri mune kambani, iwe unofanirwa kuve nehukama mune yako profiles.
22. Blogger uye influencer inosvika. Mune blogger inosvika, iwe unobata nevanopa simba sevaridzi vesaiti kana YouTube vlogger uye nekuvakurudzira kuti vagadzire zvinhu zvinoenderana nemapeji ako.
"Kusvikira kwakakosha kunosanganisira kuchinjisa kukosha," akadaro Fishkin muvideo yeMoz. "Sezvo iwe urikuenda kunze uye uchiedza kuwana chinongedzo kubva kune mumwe munhu zvakananga kuburikidza nekubatanidza nzvimbo yekufambiswa, kuburikidza nehukama hwe-humwe chete ... kana iwe ukasapa kukosha, kana iwe uchingokumbira chimwe chinhu, yako kubudirira rate iri kuenda." kuderera kwazvo. ”
"Kukosha kunogona kuve boka rezvinhu zvakasiyana. Kukosha kunogona kuve mune iyo iyo iyo inowedzera. Inogona kunge iri mumatambudziko ayo ayo anobatsira kugadzirisa. Zvinogona kunge zviri muchimiro cheizvo iwe waakavapa mukuchinjana. Zvinhu zvakawanda. ”
Fishkin's point ndeyekuti blogger neproperencer yekuita haisi nezve kubata veblog uye kuvabvunza kuti vafarire. Zviri zvekuchinjana kukosha.
23. Yakaputswa simbi chivakwa. Chidimbu chakaputswa chinongonongedzera kune peji iro risingachawanikwe. Zvidimbu zvakaputsika zvinogadzirisa mushandisi ane ruzivo. Nzvimbo dzinofanira kudzivisa.
Ziva zvimiro zvakaputsika pamapeji izvo zvinogona kuve zvine mvumo muindasitiri iyo bhizinesi rako rinoshanda. Unogona kushandisa zvishandiso senge W3C's Link Checker, Dead Link Checker, kana PowerMapper's SortSite kugadzira rondedzero yemasaiti ine dzakaputswa mawebhu.
Tevere, gadzira zvirimo izvo zvinonyatso kutsiva izvo zvisinga-zvekare-zviripo chero chinhu chakaputswa chinongedzwa kunongedzera. Uine yako mutsva yezvinyorwa munzvimbo, bvunza muparidzi mumwe nemumwe. Taura kuti pane chakaputswa chinongedzo pane imwe yemapeji ake. Mukumbire kuti afunge nezvako zvitsva nezvitsva zvemukati sekutsiva.
24. Unlinked kutaurwa. Positive kutaurwa kwebhizinesi rako pane mamwe mawebhusayithi kana zvemagariro nhau kunogona kubatsira kukurudzira chitoro chako uye kunogona kutumira curious shopers nzira yako.
Idzo kutaurwa dzinogona zvakare kuve iyo SEO yekubatanidza-yekuvaka mukana. Edza kutsvaga unlinked kutaurwa uchishandisa injini yekutsvaga kana sevhisi yekutarisa yakadai Taura, Ahrefs Alert, kana Awario.
Paunowana kutaurwa kwebhizinesi rako risingabatanidzi newebhusaiti yako, ingo taura nemuridzi wesaiti, kumutenda nekutaura, uye kumbira kubatana.
Kushambadzira zvemukati ndicho chiitiko chekugadzira, kuburitsa, uye nekuparadzira zvinyorwa, podcasts, kana mavhidhiyo nechinangwa chekukwevera, kuita, uye kuchengeta vatengi.
Kushambadzira kwemukati kunopa vateereri vako vevatengi uye vangangove vatengi chimwe chinhu chakakosha kuti vanzwe vachishuva kudzorera, kuti pakupedzisira vatenge chimwe chinhu kubva kubhizinesi rako.
25. Ziva zviri mukati izvo vatengi vako vanozokoshesa. Zvemukati zvaunogadzira zvinofanirwa kuve zvinoshanda, zvine ruzivo, kana zvinonakidza. Asi unoziva sei izvo zvinobatsira kana kuvaraidza kune vangangove vatengi?
Izvo zvinotanga nekuzivisa vatengi vako vavanoda uye kunzwisisa mhando dzezvinhu zvinozovakurudzira. Vamwe vatengesi vanoshandisa vatengi manna. Vamwe vanoshandisa maitiro ehutsika. Vamwe vanotanga nedanho rakabvaruka rechisungo, sezvakatsanangurwa pamusoro apa.
Izvo zvese zveiyi nzira zvine zvakafanana chishuwo chekuda kuziva iyo misoro yako vatengi vavano hanya nayo.
Funga nezve kubvunza mibvunzo mishoma inoenderana nevateereri vako vangangodaro.
Ndiani waunogona kubatsira? Ndiani achabatsirwa nezvigadzirwa kana masevhisi anopihwa nekambani yako?
Chii chinoita kuti kambani yako isiyane pane rimwe bhizimusi rinogona zvakare kubatsira vanhu ava?
26. Gadzira zvemukati. Ukangoziva zvipi zvinyorwa zvinga batsira kana kuvaraidza zvevanhu vaunoda kusvika, zvigadzira zvemukati zvirinani kwavari. Kana, isa imwe nzira, inyorere ivo.
Kunyora zvakanaka inyanzvi yakadzidza. Kunyangwe iwe uri kugadzira blog zvinyorwa, kunyorera whitepapers, kana kunyora vhidhiyo yekushambadza paYouTube, dzidza kunyora uye woita izvo zvawakadzidza.
Kune, zvimwe, nzira shoma dzekufunda.
Read more. Paunoverenga iwe unoona mataudziro anoita vamwe. Unotora chinzvimbo uye izwi. Verenga zvinyorwa zvakafanana neizvo iwe zvaunoda kunyora.
Kudzidza kunyora. Copyblogger media inoburitsa zvinyorwa uye podcasts nezvekunyora. Inopa makosi kuti uve munyori ari nani. Tora mamwe eaya makosi kana akafanana nawo.
Nyora. Hauzovi nani pakunyora kusvika watanga.
27. Shambadzira uye ugovera zvako zvemukati. Shambadza izvo iwe zvaunogadzira (a) pane yako blog blog, (b) sevaenzi positi pane mumwe blog blog, (c) sevhidhiyo paYouTube, (d) kana sePodcast paRedCloud kana iTunes.
Kana ichinge yaburitswa, inogona kugoverwa pama media enhau kana pane mamwe mablog kana saiti. Goverana nezvako pane mapuratifomu akawanda sezvazvinonzwisisika kune rako bhizinesi.
Email iri pakati pemhando dzekare uye zvakanyanya kugadzira mafomu ekushambadzira kwewebhu.
28. Bvunza kune vanyorera. "Kana iwe uchida kuwana vanyoreri kune yako email [rondedzero], iwe unofanirwa kushanda nesimba pairi. Sanganisira fomu rekunyorera pane peji rega rewebhu rako. Kurudzira kusaina-up kuburikidza nemahara evachena, maebooks, kana zvimwe zvigadzirwa, ”akanyora Dr. Ralph Wilson, muvambi weWebhu Kutengesa Mazuva ano uye munyori wekutanga wedzidziso iyi.
"Kana uine bhizimusi remuno, kumbira vatengi kuti vanyore tsamba yako yeemail kuti vawane 'zvipo zveInternet-chete.'”
Shandisa a pinda kaviri-mukati zvekunyorera email.
29. Gadzira nhaurwa inogamuchirwa. Iyo yekugamuchira inotevedzana inosanganisira kanosvika matatu maimeri mameseji anotorwa kana mumwe munhu akanyorera kune yako email runyorwa.
Mharidzo yekutanga inofanira kutumirwa nguva mushure mekunge munhu anyoresa apedza kunyoresa kaviri. Iyi meseji inoita kuti wako anozvinyoresa azive kuti awedzerwa kune rondedzero uye anotsanangura zvaangatarisira.
Anenge mazuva maviri mushure mekutanga meseji, tumira imwe inokurudzira uyo anonyorera kuti aite nebhizinesi rako. Izvi zvinogona kuve kukokwa kwekubatanidza pane media media, tsvaga zvirimo pane yako blog, kana shopu pane yako saiti.
Kana wako mutsva wekunyoresa asina kutenga muvhiki yekutanga, tumira chakakosha. Zvichida izvi ndezvemahara zvekutumira zvekupa kana mutengo wekutenga kwekutanga.
30. Gadzira positi yekutenga email. Kune akawanda email mameseji kutumira mutengi mushure mekutenga. Icho chinangwa ndechekutaura nezve iyo yekuraira, kukurudzira mhinduro nezvezviitiko zvekutenga, uye kuwana mamwe mairairo.
Aya mameseji anosanganisira:
Kurudziro yekurayira yekutenda mutengi uye kusimbisa yeyi yese yeruzivo ruzivo. Iyi meseji inofanirwa kusanganisira zvinongedzo kune vashandi vevashandi vevatengi uye dzimwe nzira mutengi anogona kubata nebhizinesi rako.
Chiziviso chekutumira kana ngarava dzinotakura. Usakanganwa ruzivo rwekutevera.
Yekusvitsa chisimbiso iyo inogona zvakare kusanganisira kokero kune yeNet Promoter ongororo.
Kana mutengi achinge adaira kwemazuva mashoma, tumira email uchibvunza kuti chigadzirwa chigadziriswe uye kukurudzira mutengi kugoverana naye nezvekutenga muonerwo pa media yenhau.
Mirira imwe imwe vhiki uye wotumira yakasarudzika chigadzirwa kukurudzira, uchikoka mutengi kudzoka kuzotenga kumwe.
31. Shandisa kutenga zvinogadzirisa email email. Uchishandisa pateni yakafanana neyemugamu wekugamuchirwa uye yepasuru-yekutenga nhete, gadzira yakawedzera chinotungamirwa email mameseji.
Semuenzaniso, iwe ungade kutumira vatengi vasina kutenga muna 60 mazuva ekudzokorora kubatanidzwa. Kana, pamwe, tanga email email apo mumwe munhu anotora ebook kana chena.
32. Tumira zvikamu zvikamu-zvakananga mameseji. Haasi munhu wese pane yako email rondedzero akafanana. Izvi zvinoita sezviri pachena, asi mazhinji mabhizinesi anotumira iwo akafanana email mameseji kune wese anonyoresa.
Pane nguva apo izvi zvinogamuchirwa. Asi kune iyo yakawanda chikamu, chikamu chikamu chako email kunyorera zviri nani vanyoreri vako. Saka tumira meseji (pamwe vhiki nevhiki) mameseji, asi gadzira vhezheni dzinoverengeka dzeaya mameseji anotarirwa kune chaiwo zvikamu zvevateereri.
Nyanzvi yekushambadzira Neil Patel ane runyorwa rwakanaka rwe 10 inokurumidza email zvikamu kufunga. Uye Pat Flynn, muvambi we Smart Passive Income, akagadzira vhidhiyo inobatsira pane kukosha kweemail chikamu.
The Performance Kushambadzira Association inoshandisa tsanangudzo yakajeka yekushambadzira kwekuita, ichidana iyo, "izwi rakazara rinoreva kushambadzira kwepamhepo uye zvirongwa zvekushambadza umo vashambadziri vanobhadhara makambani ekushambadzira kana chimwe chiitiko chapera; sekutengesa, tungamira kana kubaya. ”
Saizvozvo musiyano mukuru ndewekuti nekushambadzira kwekuita iwe - mushambadziri - kubhadhara kushambadza kana chinge chaita. Iwe unongobhadhara kushandurwa, sekudzvanya kana kutengesa.
Performance kushambadzira inokupa iwe kwakakosha kudzora kwako dzoka kushambadzira mari.
33. Mhanyai Smart Campaign paGoogle Ads. MunaJune 2018, Google yakazivisa kuti yaizodzoreredza nzvimbo yayo yeAdWords mbiri, ichitumidza kuti Google Ads.
Sechikamu chekuvandudza, Google ichasimudzira zvayo Smart Campaigns ad ad mhando, yaimbove iripo pane yekuratidzira network, kune yakasarudzika.
Smart Campaigns inotsamira pakudzidza pamushini kuisa yako kushambadzira pamberi pevatengi vako vanogoneka nenzira inobudirira. Zvinoenderana neGoogle, Smart Campaigns inogona kuwedzera mibairo ne 20 muzana nemutengo mumwe chete wakaenzana pachiito.
34. Ronga PPC mazwi makuru, mapoka ezvishambadziro, uye mapeji ekutakura. Pamusoro peGoogle's Smart Campaigns, gadzira mibhadharo yekubhadhara-kubhadhara-pachako. Funga nezvekuwedzera PPC network, seBing uye Yahoo. Uye usakanganwa nezve Zvigadzirwa Zvekutsikisa Ads pane Google Shopping.
Kutanga yako Campaign yePPC nemazwi makuru. Tevedzera mutauro uyo vatengi vako vanoshandisa kana vachitsvaga zvigadzirwa kana masevhisi akafanana neyako.
Tevere, kuvaka mapoka ezvishambadziro, pamwe uchishandisa izwi rimwe chete remutsara paboka reshambadziro. Wobva waedza nzira yako kubudirira.
Usakanganwa kuti kune zvakawanda kune kushambadzira kwePPC pane kungobhaidza zvakakwirira. Kunyange zvinzvimbo zvinowanikwa zvinogona kusiyanisa, Dr Wilson akatsanangura maitiro aya zvakanaka.
Iyi inoshambadzira yePPC inoonekwa pane peji rekutsvaga injini, kazhinji kumusoro uye kurudyi kwemanyorero kana zvakasikwa injini yekutsvaga mhinduro. Sezvo ivo vari keyword-inotungamirwa, vanogona kuve vakanyatsoenderana nezviri kutsvakwa nemutauri kutsvaga. Chinzvimbo chako mune ino runyorwa rwemavhidhiyo ezvinyorwa zvakabhadharwa anotarisirwa ne (1) kuti iwe wakadii kubhadhara izwi rekutsvaga kana uchienzaniswa nemamwe mabhizinesi, (2) chiyero chekupinda-pashanyo pane chako kushambadzira, uye (3) yako Quality Score, iyo inoratidza kukodzera uye kunaka kweshambadziro yako uye peji rekutakura raanongedzera.
35. Gadzira mushandirapamwe wekudzokorora. Kutangazve kunokubvumidza kuti uratidze kushambadzira kune vangangove vatengi vakatoshanyira webhusaiti yako. Uchishandisa yekushambadzira senge Google Ads, unogona kuitazve vatengesi pavanoshanyira mamwe masosi muGoogle kushambadzira network.
Heano mashoma zviwanikwa zvekubatsira. Kutanga, Google yakaburitsa vhidhiyo pfupi mu2015 ichitsanangura izvo zvekutanga zvekudzokorora.
Chechipiri, Tom Holder, nyanzvi yePPC, akatsanangura maitirwo ekutanga chirongwa muGoogle Ads.
36. Isa kushambadzira kwekuita pa Facebook. Iyo yakakurumbira social media chikuva ikozvino yechipiri yakakura kuita-based kushambadzira network.
Zvishandiso zveinjini yekutsvaga zvinovakirwa pane mushandisi wekutsvaga chinangwa. Shambadziro yako inoonekwa padivi pechinangwa ichocho. Ichi ndicho chikonzero kushambadzira kunotarisana nekutenga basa zvakanyatsonaka.
Facebook rakasiyana. "Vanhu vari paFacebook vari kutsvaga kubatana neshamwari dzavo," akatsanangura Neil Patel. "Vari kutsvaga mifananidzo, mavhidhiyo uye madziro evanhu. Nechikonzero ichocho, kushambadzira kwako hakuzoshanduri nenzira imwechete yavangazoita paGoogle. "
Asi kana iwe uchida kuita musika mutsva uye chaiwo zvikamu zvinofarira, Facebook isarudzo yakasimba.
"Kana iwe uchida kutevera vakadzi vanofarira runako nekuti iwe unoda kuti vazive nezvewako chigadzirwa chekunaka chiri kushandura indasitiri, Facebook inokatyamadza izvo."
37. Shamba paYouTube. YouTube inoshambadzira inogona kubatanidza bhizinesi rako nevateereri vakakura vevangangove vatengi. Uye iyo vhidhiyo format inopa inobatsira ekureba mukutaura kwako kukosha kwezvinhu zvako zvigadzirwa nemasevhisi.
Gadzira chiteshi cheYouTube chako cheshambadziro yemavhidhiyo. Tsanangura macampaign ane musoro weYouTube, gadzira vhidhiyo yako yekushambadzira, tsanangura vateereri vako paYouTube (ine huwandu hwevanhu), uye mhanyisa mushandirapamwe wako.
Sezvinei neese mashambadziro ekushambadzira, tarisa mushandirapamwe wako uye awedzere iwo wekushandura.
38. Gadzira chirongwa chekushambadzira. Affiliate marketing ndeye yekusimudzira muenzaniso inobatanidza mabhizinesi neakazvimirira vatengesi vanofarira kuisa nguva nemari kutengesa zvigadzirwa zvekambani.
Sezvimwe nedzimwe nzira dzekushambadzira kwekuita, kambani yako inongobhadhara chete kana vanobatana varera yakatarwa chiitiko chevatengi. Mune ecommerce mamiriro, chiito ichocho kazhinji kutenga. Izvi zvinoita kuti kushamwaridzana kushambadzira kuve mutengo unoshanda.
Kumisa chirongwa chekubatana kunotora rimwe basa. Kune vashandisi vanogona kubatsira. Asi iwe uchiri kufanira kutsanangura mashandiro ako, isa iyo yekubhadhara (komisheni) pachiitiko chimwe nechimwe, tarisa kuti vanobatana sei vari kusimudzira bhizinesi rako, kuyera kushandira mushandirapamwe, uye neimwe nzira tarisa shanduko, kutengesa, uye purofiti.
Nepo kushamwaridzana kushambadzira kunotora zvishoma basa, inogona kuve inobereka kwazvo kune rako bhizinesi.
Nechinyakare sekushambadzira kwematairini zvakananga kungaratidzika, inoramba iri chishandiso chinobatsira kune vatengesi vewebhu. Iyo inomhanya chaizvo yakatumira tsamba kana yakagoverwa tsamba yekushambadzira inogona kuburitsa mimwe mhedzisiro yakanaka yezano chero ripi pane iri runyorwa.
39. Shandisa yakapihwa tsamba kutumira. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa mailers kuUnited States ndiValpak. Mwedzi wega wega, kambani inotumira envelopu izere nemakoni kumamiriyoni emisha inokwanisa munyika yose.
Nzvimbo dzenyika dzakadai seBest Buy, Target, Old Navy, Macy's Lowe's, uye Sam's Club vanogara vachigovaniswa tsamba vashambadziri.
Kune yako yekugovanisa tsamba kukwidziridzwa, gadzira coupon kodhi inogona kushandiswa nevatengi pane yako saiti. Wobva wangopima kuti mangani emakopi coupon anoregererwa. Gadzira hypothesis yekutendeuka, gadziridza coupon yako, uye bvunzo zvakare mumwedzi inotevera.
Broad inopa inowanzoita zviri nani pane yakatetepa. Asi, zvakare, bvunzo inopa nekufamba kwenguva. Vamwe vatengesi-uye-mabhatani vatengesi vakataura kuti vanowana mari inodarika $ 20 mukutengesa kune yega yega dollar inoiswa mune dzakatumirwa tsamba kutumira.
40. Kwezva vatengi vatsva. Kutungamira online vatengesi vakaita seHayneedle, Wayfair, HelloFresh, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa tumira tsamba kushambadzira kuti uwane vatengi vatsva. Iwe unogona, zvakare.
Kutanga nekutenga runyora rwekutumira kubva kune anotungamira zvinyorwa anopa. Runyorwa rwako runogona kunge rwunotarisana nenzvimbo yenzvimbo kana paruzhinji.
Gadzira mushandirapidzo wekuona izvi tarisiro uye utumire meseji yako kudzimba kana kumahofisi.
Semuenzaniso, fenicha mutengesi Wayfair inotumira yakatumira tsamba yekutumira kune vatengi vanenge vachangotamira kuimba nyowani. Iyo inopa "inogamuchira" muridzi wemba nyowani kune vavakidzani uye inopa kodhi inosimudzira yeimwe yakaderera 10-muzana dhizaini.
Iyi Yechinyorwa cheMutsara
Internet kushambadzira piyona Dr. Ralph F. Wilson akanyora yepakutanga Webhu Inotarisa Chekutsvaga yemagazini yake inozivikanwa paWebhu Kushambadzira Nhasi, iyo yakabudiswa kubva ku1995 kuenda ku2016.
Wilson akatsvaga kubatsira mabhizinesi kuti anzwisise maitiro ebudiriro pamhepo. Makambani mazhinji akabatsirwa nebasa rake. Mu2012, Inoshanda Ecommerce yakawana Webhu Kushambadzira Nhasi. Zvadaro mu2016, Webhu Yekushambadzira yanhasi yezvinhu yakasanganiswa muCustomical Ecommerce.
Maitiro ekuseta otomatiki email Kushambadzira Workflows (+ Mienzaniso)